Ba (barium) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
Ba =? | Isu dheellitirka Kiimikada
H2 + Ba → BaH2
hydrogen barium Biyo-biyoodka; Cusbada barium Dihydrogen
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2 + Ba → BaH2
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2 (hydrogen) ay kaga falceliso Ba (barium)?
Heerkulka: 150 - 300 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)?
Dhacdada ka dib H2 (hydrogen) waxay la falgashaa Ba (barium)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2 + Ba → BaH2
Su'aalaha la xidhiidha badeecada BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaH2 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt) badeecad ahaan?
H2S + Ba → H2 + Hoose
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2S + Ba → H2 + Hoose
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2S (hydrogen sulfide) ay kaga falceliso Ba (barium)?
Heerkulka: > 350
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo BaS ()?
Dhacdada ka dib H2S (hydrogen sulfide) waxay la falgashaa Ba (barium)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Hoose, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2S + Ba → H2 + Hoose
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Su'aalaha la xiriira badeecada BaS ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaS (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaS () badeecad ahaan?
2NH3 + 6Ba → 3BaH2 + Ba3N2
ammonia barium Biyo-biyoodka; Cusbada barium Dihydrogen
2 6 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NH3 + 6Ba → 3BaH2 + Ba3N2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NH3 (ammonia) ay kaga falceliso Ba (barium)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa BaH2 (Barium hydride; Dihydrogen barium salt) iyo Ba3N2 ()?
Dhacdada ka dib NH3 (ammonia) waxay la falgashaa Ba (barium)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Ba3N2, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NH3 + 6Ba → 3BaH2 + Ba3N2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ba3N2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ba3N2 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba3N2 () badeecad ahaan?
2HCl + Ba → BaCl2 + H2
koloriin koloriin barium koloriin barium hydrogen
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2HCl + Ba → BaCl2 + H2
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa BaCl2 (barium chloride) iyo H2 (hydrogen)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa Ba (barium)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2HCl + Ba → BaCl2 + H2